လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိဟု ထုတ်ပြန်
ဗုဒ္ဓဟူး, ၂၂ မေ ၂၀၁၃	Mizzima Burmese
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိဟု ထုတ်ပြန်
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိဟု ထုတ်ပြန်	မျိုးသန့်	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မတ်လ ၂၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၅၂ မိနစ်	ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ၍ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း အဖြစ်မှ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၏ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် ယင်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်း ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများမှတဆင့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည်။မတ်လ ၁၆ ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ၎င်းကော်မရှင်အား ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း မဟုတ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး ဘတ်ဂျက်ဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရသော်လည်း “ဘတ်ဂျက် ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်း အသုံးစရိတ်တွင် ထည့်ထားခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းသည် ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် အကောင်အထည်ဖေါ်ခြင်းတို့ကို ပျက်ပြယ်စေခြင်း မရှိနိုင်ပေ” ဟု ကော်မရှင် ထုတ်ပြန်ချက်အတွင်း ဖေါ်ပြပါရှိသည်။ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှ သမ္မတသို့ ပေးအပ်ထားသော အုပ်ချုပ်မှုအာဏာအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်ဟုလည်း အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၁၆ ကို ကော်မရှင်က ကိုးကားထားသည်။ပုဒ်မ ၂၁၆ တွင် “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် ပြည်ထောင်စု၏ အုပ်ချုပ်မှု အာဏာသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဥပဒေပြုနိုင်သော အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များသို့လည်း သက်ရောက် ပျံ့နှံ့သည်” ဟု ပြဋ္ဌာန်းပါရှိသည်။ထို့ကြောင့် “ပေးအပ်ထားသော တာဝန်များကို နိုင်ငံတော် သမ္မတသည် လွှဲအပ်သော အုပ်ချုပ်မှုအာဏာများ ကျင့်သုံး အကောင်အထည်ဖေါ်ခြင်း၏ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကော်မရှင်အနေဖြင့် ခံယူပါ သည်” ဟုလည်း ထုတ်ပြန်ချက်အတွင်း ဖေါ်ပြထားသည်။သို့သော် သမ္မတသည် ကော်မရှင်ကို ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ထည့်သွင်းကာ ဘဏ္ဍာရေး အသုံးစရိတ် တောင်းခံခြင်းမှာမူ အခြေခံဥပဒေနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေမူကြမ်း ကော်မတီ ဝင် ဒေါ်နန်းဝါနုက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။“သမ္မတရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ သူ့ဟာသူ လုပ်သွားပေါ့။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရဲ့ အကြံပေးအဖွဲ့လိုမျိုး အဖွဲ့အစည်းလောက်ပဲ ဖွဲ့ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ သုံးဖို့ငွေ တောင်းတာပေါ့။ အဲဒီလိုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ဗဟို အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုချက် ရယူပြီးတော့ ဘဏ္ဍာငွေ သုံးပိုင်ခွင့်ရှိမှာ” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် ၂ဝ၁၂- ၂ဝ၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အသုံးစရိတ် ကျပ်ငွေ ၁၃၃ သန်းတောင်းခံခဲ့ပြီး ထိုတောင်းခံမှုကို မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ပယ်ချခဲ့သည်။ကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဥပဒေကြမ်းကို သမ္မတ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ရေးဆွဲနေပြီ ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်သို့တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက် ရယူသွားမည်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့် ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အမိန့်ကြေညာချက်အမှတ် ၃၄/၂ဝ၁၁ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အမိန့်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မျိုးကြည်မှ လက်မှတ်ထိုးထားသည်။ကော်မရှင်တွင် အငြိမ်းစားသံအမတ်များဖြစ်သည့် ဦးဝင်းမြက ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူပြီး၊ ဦးကျော်တင့်ဆွေက ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားသည်။ အတွင်းရေးမှူးမှာ အငြိမ်စား လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစစ်မြိုင်ဖြစ်သည်။
Mobile Team များဖြင့် ဖမ်းဆီးနေသော်လည်း မှောင်ခိုတင်သွင်းမှု တားနိုင်ခြင်းမရှိသေး
ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ် ကုမ္ပဏီ ကိုယ်စားလှယ် ၃၀ ကျော်နှင့်အတူ လာမည်
အာရှကိုသာ အားထားပို့သည့် မြန်မာ့နှမ်း အီးယူဈေးကွက်သို့ တိုးချဲ့
မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ မူးယစ်မှုဖြင့် သံသယရှိသူ ၈၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးရမိထား
KIO က အစိုးရ ငြိမ်းအဖွဲ့နှင့် ပြန်လည်တွေ့ဆုံရန် အဆင်သင့် မဖြစ်သေး	ပုဂ္ဂလိက နေ့စဉ်သတင်းစာများ ဧပြီ ၁ တွင် စတင်ထုတ်ဝေခွင့်ပြုမည်	လက်ပံတောင်း ကော်မရှင်အား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပညာရှင်များ ကူညီ	ဟဲဟိုး လေယာဉ်ပျက်ကျမှု စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေး	ထားဝယ် စီးပွါးရေးဇုန် ဧရိယာ မြန်မာ လျှော့ချလိုဟု ထိုင်းသတင်းစာဆို	သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေကြမ်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ	မိုးထိမိုးမိ လုပ်သားခေါင်းဆောင်များ ရုံးချိန်းတွင် ပုဒ်မ ထပ်တိုးခံရ	Who is Online
We have 86 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved